laacib » Muxuu Cristiano Ronaldo ka yiri inuu markiisii shanaad ku guuleystay abaal-marinta Goal50?
Muxuu Cristiano Ronaldo ka yiri inuu markiisii shanaad ku guuleystay abaal-marinta Goal50?
Kaddib markii uu Weeraryahanka laacibkii Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ku guuleystay markiisii shanaad abaal-marinta Goal50, waxana uu ka hadlay hanashada abaal-marintaas.
Cristiano Ronaldo ayay shabadda Goal u aqooqsatay inuu yahay xiddigii ugu fiicnaa Adduunka xilli ciyaareedkii hore ee 2016-17.
Kabtanka Portugal ee Ronaldo ayaa shaaca ka qaaday inuu si weyn ugu faraxsan yahay inuu markale ku guulaysto abaal-marintaan, wuxuuna u mahadceliyay dhammaan intii u codeysay, isagoo hanashada abaal-marintan ka hadlayeyna waxa uu yiri.
“Waxaa farxad ii ah inaan makale hanto abaal-marintaan, waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan intii ii codaysay, waxaana ugu horreeya asxaabteyda laacibkii iyo shaqaalaha Real Madrid kuwaas oo la’aantood aysan ii suurogali lahayn inaan ku guulaysto”
“Marwalba waxaan tilaab u qaadaa sidii aan ugu jiri lahaa heer wanaagsan, mararka qaar wax walba ma noqdaan sida aan jecelnahay, laakiin tijaabada ayaa i bartay inay waajib nagu tahay inaan wadno shaqada dhabta ah si aan u gaarno hadafkeenna”.